योनी, यौनसम्पर्क र योनीको गन्ध - यौन जिज्ञासा र समाधान - साप्ताहिक
योनी, यौनसम्पर्क र योनीको गन्ध
 योनि तथा यौनाङ्ग क्षेत्रलाई सफा राख्ने । हल्का किसिमको साबुन–पानीले योनिको बाहिरी भाग प्रत्येक दिन धुने । दिसा–पिसाबपछि टिसु पेपरले पुछ्नहुन्छ भने अगाडि (योनि) तिरबाट पछाडि (मलद्वार) तिर लगेर पुछ्ने । पछिल्तिरबाट अघिल्तिर ल्याएर पुछ्दा मलद्वारमा भएका जीवाणु योनिमा सर्न सक्छन् ।
 भित्री पहिरन (अन्डरवेयर) धेरै कसिलो तथा नाइलन, पोलिस्टर वा रेयोनले बनेको हुनु हुँदैन । बरु सुतीले बनेको मात्र प्रयोग गर्ने । यौनाङ्ग क्षेत्रलाई ओभानो राख्नुपर्छ । धेरै गर्मी वा धेरै ओसिलो भए जीवाणुको संक्रमण हुने सम्भावना हुन्छ ।
 सफा गर्न भनेर धेरैले योनिमा डुस दिन्छन् । स्वस्थ योनिले आफूलाई सफा गर्ने आफ्नै प्राकृतिक विधि हुन्छ । डुस दिने, कडा किसिमको साबुन वा डिओडेरान्टको प्रयोगले योनिको प्राकृतिक अवस्थामा असन्तुलन ल्याउँछ र संक्रमणलाई बढावा मिल्छ ।
 भित्री पहिरन (अन्डरवेयर) दिनहुँ फेर्नुपर्छ ।
 पर्याप्त मात्रामा पानी पिउनुपर्छ जसले गर्द पिसाब सफा होस् ।
 अत्यधिक सुगन्धित साबुन, टेम्पोन, प्याड, स्प्रे वा बबल वाथ जस्ता कुरा प्रयोग नगर्दा संक्रमणको सम्भावना कम हुन्छ । यौनसम्पर्कका कारणले नै योनि तथा प्रजनन अङ्गमा संक्रमण हुन सक्ने भएकाले यसलाई कन्डमको प्रयोगबाट सुरक्षित बनाउनुपर्छ । यदि यौनसम्पर्क राख्नबाट परहेज गर्न सकिँदैन भने यौनरोग लागे–नलागेको निदान गरेर यौन साथीसहित आफ्नो पनि पूर्ण उपचार गर्नुपर्छ ।
प्रकाशित :माघ २५, २०७४
यौनसम्पर्कका बेला भुल्न नहुने कुरा
मानिसले किन गुदामैथन गर्छन् ?
मानिसले किन गुदामैथन गर्छन् ? फाल्गुन ८, २०७५
गर्लफ्रेन्डसँग यौन सम्बन्ध राख्न चाहन्छु : उनी मान्दिनन् , अब के गर्दा उत्तम हुन्छ माघ २५, २०७५
हस्तमैथुन र यसका सकारात्मक पक्ष माघ १५, २०७५
नियमित यौनसम्पर्क र गर्भ रहने डर माघ ११, २०७५